Global Voices teny Malagasy » Singapaoro: Fanentanana ‘Tsy mila fanolanana’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Marsa 2019 15:40 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Singapaoro, Lalàna, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
(Lahatsoratra teny anglisy tamin'ny desambra 2009)
Ao Singapaoro, tsy raisina toy ny fanolanana ny fanolanana ny vadinao.
Nefa tokony ho fanolanana izany.
Izany no hafatra lehibe ao amin'ny fanentanana ‘No To Rape (tsy manaiky fanolanana)  navoaka tao amin'ny pejy Facebook - ny vondrona. Ny tanjon'ireo mpikarakara dia ny hanafoana ny lalànan'ny tsimatimanota amin'ny fanolanana ao an-tokantrano ao Singapaoro.
Manohana hevitra tsotra iray Ny fanentanana ‘Tsy manaiky fanolanana': herisetra heloka bevava ny herisetra ara-nofo ataon'ny olona ​amin'ny olona. Noho izany, tokony ho raisina ho fanolanana ny firaisana ara-pananahana tsy misy fankatoavana, tsy hijerena hoe vady na iza no lasibatra na mpiherisetra
Efa nahangona sonia maherin'ny 3.000  sahady ny vondrona ka homena ny praiminisitra izany
Te-hisaotra ny rehetra izay nanome ny fanohanany ho an'ny fanangonan-tsonia “No To Rape” izahay mba hanafoanana ny tsimatimanota amin'ny fanolanana ao an-tokantrano ao Singapaoro. Roapolo minitra izay, efa nahazo sonia maherin'ny 3600 ny fanangonan-tsonia.
Afaka andro vitsy manaraka, hametraka ny angon-drakitra voaangona rehetra any amin'ny praiminisitra, Lee Hsien Loong amin'ny alàlan'ny mailaka sy an-taratasy mivantana isika.
Mahita i Barnyard Chorus fa “ny kolontsain'ny fanolanana  ao Singapaoro dia tranga iray izay nahagaga anay tokoa ary nanakorontana anay raha nahazo vahana tanteraka tsy misy henatra, manambany vehivavy ary vetaveta.”
Manohana  ny fanentanana ‘Tsy mila fanolanana’ i Syinc
Andeha hojerentsika ny lafiny iray momba ny haratsian'izany.
Raha misy olon-tsy fantatra manolana olon-tsy fantatra, dia tsy azo inoana fa hihaona indray izy ireo.
Raha misy lehilahy manolana ny vadiny, dia hifankahita isan'andro izy ireo. Raha ny marina, mety hitohy hatrany ny fanararaotana. Angamba, isan'andro.
Rehefa misy olona nampanantena ny hitia sy hiaro anao na amin'ny ratsy na tsara kanefa manao izany fihetsika mahatsiravina izany – dia mamela holatra tsy hay fafana eo amin'ny sain'ilay olona izany.
The Temasek Review manazava  ny antony mahatonga ny olon-drehetra ho voakasika
Mampitambatra ny vehivavy sy ny lehilahy, ny tanora ary ny antitra, ny olona avy amin'ny foko samihafa, ny mpino avy amin'ny finoana samihafa ary ireo tsy mpino ity fanentanana ity. Na inona na inona tontolo mikasika anao, manana tombontsoa iombonana amin'izany isika. Mendrika ho arovan'ny lalàna mifehy ny herisetra ny olon-drehetra, na iza na iza manao izany. Daroka ny fanolanana, endrika fanararaotana, izay mitranga amin'ny fampiasana taovam-pananahana fotsiny fa tsy totohondry.
Namoaka dokambarotra maromaro mandrisika ny Singapaoreana hanohana ilay fitakiana fanangonan-tsonia ny fanentanana ‘Tsy mila fanolanana’
Saingy misy ireo mpiserasera sasany tsy manohana ny fanentanana. Toolang naneho hevitra tao amin'ny bilaogy The Online Citizen
Mampiseho ny valinteny ratsy fa raha manohana ny fanentanana hampiditra ny fanolanana am-panambadiana ho anaty lalàna ny mpivady tsirairay, dia ho sahirana mandritra ny taona ny Polisy ka tsy hanam-potoana hiaro an'i Singapaoro manoloana ireo heloka bevava sy fampihorohoroana afa-tsy ny famotopotorana izay ataon'ny olona an'arivony isan'alina eo ambony fandriana, mba hamaritana raha nampiasa hery be loatra tamin'ny vady. Raha nampiasaina tokoa ny hery tafahoatra ary mitovy amin'ny fanolanana am-panambadiana, dia mety handany volana maromaro ny polisy hanadihady izany. Mandritra izany, mifanaraka ny mpivady ary manao fialam-boly hafa indray eo ambony fandriana mba hamaha ny fifandirana ary tsy te-handeha lavitra intsony. Tsy misy dikany ny ezaka rehetra ataon'ny polisy. Te hanolo-kevitra ireo mpikaroka aho mba handeha eny amin'ny Fitsarana ambony sy ny Fianakaviana ary mahatakatra ny olana ara-pianakaviana sy ny olana eo an-tokatrano alohan'ny hanombohana izany fanentanana izany.
Mihevitra  i Btan fa tsy nahavita nahangona sonia ampy ireo mpikarakara satria tsy ampy ny tena fanohanan'ny vahoaka izany
Mbola mandà ireo mpanangon-tsonia. Ny tsy fisian'ny sonia dia tsy noho ny tsy fisian'ny dokambarotra na fahazotoana, fa noho ny ankamaroan'ny olona mahafantatra fa tsy misy dikany sy adala ity fanangonan-tsonia ity.
Manevateva ny olona, ​​indrindra fa ny vehivavy ireo mpanangon-tsonia, amin'ny fiheverana fa tsy afaka mikarakara ny tenany izy ireo rehefa manana ny lanjan'ny lalàna manontolo ho ao andamosina.
Tsara kokoa izy ireo raha mampifantoka ny heriny ho amin'ny fotokevitra mendrika kokoa, toy ny fametrahana rafitra roa ara-drariny ao Singapaoro izay tsy hamafana ny olom-pirenentsika ho tahaka ny andevo ary hobosesika mandoto ny fanahim-pirenentsika ny vahiny.
Mirehitra ny trano ary manahy momba ny andro maharatsy volo ry zareo?
Raiso ny laharam-pahamehanao.
Manana kaonty Twitter  ihany koa ny hetsika “Tsy mila fanolanana” .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/03/25/136431/
 ‘No To Rape (tsy manaiky fanolanana): http://www.NoToRape.com/Blog
 pejy Facebook -: http://www.facebook.com/group.php?gid=25846462465
 sonia maherin'ny 3.000: http://www.notorape.com/blog/2009/12/01/petition-closed/
 kolontsain'ny fanolanana: http://barnyardchorus.blogspot.com/2009/11/public-announcement-service-no-to-rape.html
 naneho hevitra : http://theonlinecitizen.com/2009/10/petition-against-marital-rape-off-to-slow-start/